Momba anay - Knowledge Printing Co., Ltd.
Tongasoa eto fahalalana Fanontam-pirinty!
Akanjo fanaovana akanjo sy baoty
Fanontana boky Hardcover
Softprint Boky fanontana
Fanontana boky haingo
Fanontana boky momba ny loko
Brochure / ravin-gorodona ravina / Flyer / Poster
Bokikely / Namecards
Cards Flash fampianarana
Vokatra natao manokana
Vokatra vonona handefa
Wang Shumin dia mpanorina ny orinasa.
Ny orinasa anay dia naorina tamin'ny taona 2000 raha ny marina, saingy tsy manana anarana orinasa izahay tamin'izany, mba hanomezana izay ilain'ny varotra eo an-toerana fotsiny. Ankoatra izany, tao an-trano ny tsenanay. OEM fotsiny no nanamboaranay ary tsy niditra ny tsena iraisam-pirenena.
Tamin'ny taona 2012 dia nitombo hatrany ny baiko manokana nataontsika, ka mila mividy fitaovana betsaka isika ary hifindra amin'ny atrikasa lehibe kokoa. Noho izany dia nanao ny fanoratana ny orinasa izahay ---Qingdao Shuying Commercial Trading Co, Ltd. Amin'ny taona 2017, miaraka amin'ny fampandrosoana ny indostrian'ny famonosana, mila misoratra anarana ara-barotra isika, fikarohana ary mamolavola teknolojia bebe kokoa, ka dia natsangana izahayQingdao Knowledge Printing Co., Ltd. mikendry manokana amin'ny fonosana taratasy sy ny vokatra vita pirinty.
Ny vokatra avy any aminay dia boaty, kitapo taratasy, boky, karatra fiarahabana, sns .. Ny orinasa kami dia ao Jimo, Qingdao ary manana traikefa famokarana be dia be mihoatra ny 16 taona. Manana fifandraisan'ny fiaraha-miasa mandritra ny fotoana maharitra miaraka amin'ireo trano fanontana fantatra eo an-toerana izahay ary orin'olom-bary sy solika.
Manana milina fanontana izahay, teknolojia, inspektera kalitao sy mpiasa. Manomboka amin'ny taona 2018 dia manomboka ny raharaham-barotra any ivelany isika, satria efa nahazo traikefa feno amin'ny fomba fitaterana, fanaraha-maso ny kalitao sy ny fanaraha-maso ny fotoana ary ny fomba fandefasana entana, ambonin'izany rehetra izany, afaka manolotra vidiny mahasoa tokoa isika amin'ity orinasa ity.
Ny tanjon-tsika amin'ny fampandrosoana ny tsenan-trano dia ny hanompo ny namanay amin'ireo vokatra tsara.
Ny tanjonay amin'ny fampandrosoana ny tsena any ivelany dia ny hiteny ireo vokatra vita any Chine.
Tafiditra ao anatin'ireo tsenan-tsakafonay
United States of America, Canada, Mexico, Australia, Eropa, Azia Atsimoatsinanana, Rosiana, China, Japan, Korea, Middle East, Africa, South America, sns
Ny olona samy hafa toa ny endriny samy hafa
Ny famolavolana tsara dia tena ilaina amin'ny boaty fandokoana boky. Manana ekipa namolavola anay manokana izahay. Raha mila endrika vaovao ianao dia afaka manampy. Midika izany, afaka manolotra serivisy iray fiatoana amin'ny famolavolana hatramin'ny famokarana mankany amin'ny fandefasana izahay, ka izany no safidinao tsara indrindra.
Adiresy: RM1604, Hengtai Mansion, No.127 Liaoning Rd, Shibei District, Qingdao China 266012
Mon - Zoma: 09 maraina ka hatramin'ny 06 hariva
Sat - Sun: 09AM ka hatramin'ny 06 hariva